I-Renaissance, icwecwe elitsha likaBeyoncé, sele linomhla wokukhutshwa | Bezzia
UMaria vazquez | 19/06/2022 22:00 | Iindaba
UBeyoncé ubhengeze ngokufutshane kule veki i Ukuqaliswa kweRenaissance. Lo msebenzi mtsha uza emva kweminyaka emithandathu emva kokuza kuthi ga ngoku icwecwe lakhe lokugqibela eyedwa iLemonade athe watyunjwa kulo elona cwecwe libalaseleyo lonyaka kwiiGrammys kwaye waphumelela iwonga lelona cwecwe libalaseleyo lomculo wasezidolophini.
Iintshukumo kwi nomphakathi yamagcisa adla ngokuqikelela isibhengezo esibalulekileyo. NekaBeyoncé yayingenjalo. Yonke into yayilicebo lokubonisa uMthetho weRenaissance 1, inxalenye yokuqala yecwecwe eliya kupapashwa kwizenzo ezininzi. Ibhalwe nge-29 kaJulayiNgaba ukho umntu othandabuzayo ukuba iya kunika okuninzi ukuthetha ngayo?
UBeyonce nguye igcisa elineeMbasa zeGrammy ezininzi zembali, 48 bebonke. Imbali yayo ende kunye neyimpumelelo ithetha ukuba nayiphi na intengiso ngokuzenzekelayo inempembelelo yehlabathi. Amagama ambalwa abhaliweyo, igcisa alizange lifune enye into yokuba wonke umntu athethe malunga nokubuya ekudala kulindiwe.
2 iiprojekthi zakhe zamva nje
Yintoni esiyaziyo ngeRenaissance namhlanje? Ngaphandle kwento yokuba isenzo sokuqala siya kukhutshwa ngoJulayi 29, kuncinci okunye okuthe kwenzeka kulo msebenzi. siyazi loo nto kuphela Iya kwenziwa ziingoma ezingama-16 iphefumlelwe kwaye yabhalwa ukusukela ngo-2020.
Ukuba umculi usebenze kulo msebenzi omtsha iminyaka emininzi akukho nto entsha. Kudliwano-ndlebe olwenziwa kunyaka ophelileyo, umculi waqinisekisa ukuba wayenxibe unyaka onesiqingatha kwi studio. Ngokuphathelele injongo yakhe ngalo msebenzi omtsha, wathi emva koko: "Ngako konke ukuhlukaniswa kunye nokungabikho kokusesikweni kunyaka odlulileyo, ndicinga ukuba sonke sikulungele ukubaleka, ukuhamba, ukuthanda nokuhleka kwakhona." "Ndiziva ngathi kukho ukuvuselelwa okuzayo, kwaye ndifuna ukuba yinxalenye yokukhuthaza ukuphuncuka nangayiphi na indlela endinokuyenza. «, wongezelela.
Kuya kufuneka silinde de kube nguJulayi 29 ukuze siphulaphule inxalenye yokuqala yale projekthi intsha yomculo. Kodwa, hayi kakhulu ukuba neenkcukacha ezininzi malunga nale, okanye ke siyathemba!
iiprojekthi zakhe zamva nje
Into yokuba sekudlule iminyaka emithandathu okoko uBeyoncé epapashe umsebenzi wakhe wokugqibela ayithethi ukuba unqunyanyisiwe. Ukususela ngo-2006 igcisa lithathe inxaxheba kwiiprojekthi ezahlukeneyo ezifana AbakwaCarters, iprojekthi yomculo awabelana ngayo nomyeni wakhe uJay-Z. Kwaye abakhuphe ngayo icwecwe elithi Yonke into Luthando ngo-2018.
Kunyaka kamva, igcisa liqambe kwaye lanika ilizwi kwiingoma ezininzi zenguqulelo entsha ye Disney classic The Lion King. Ukongeza kwigcisa, ezinye iinkwenkwezi ezinje ngoChildish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrel Williams okanye intombi yakhe uBlue Ivy babambisene kuyo. Enye yeengoma ezikwingoma yesandi, iBlack Parade, iphumelele iGrammy ka-2021 yowona msebenzi ubalaseleyo weR&B, inika uBeyoncé igramafoni yakhe yegolide yama-28.
Kwangaloo nyaka umculi wanikela ilizwi lokuba uPhile, ingoma evela kwisandi seNdlela kaWilliam. UBeyoncé uvule i-94th Academy Awards ngokudlala kwalo mxholo kwiinkundla zentenetya zaseTragniew Park eCompton, ekhatshwa nguBlue Ivy Carter, abadlali beqonga bakaKumkani uRichard, uSaniyya Sidney noDemi Singleton, kunye neCompton Cowboys Junior Equestrians.
Igcisa liye lasebenzisana namagcisa ahlukeneyo afana ne rapper Megan Thee Stallio kwi-remix ye-Savage ngo-2020 okanye uNicki Minaj awabelana naye ngo-2021 ongenazimpazamo,
Ukusukela oko wenyukela kudumo ekupheleni kweminyaka yoo-1990 njengemvumi ephambili yeqela lamantombazana eR&B iDestiny's Child, umsebenzi kaBeyoncé ukhule. Ngo-2014, wafakwa kuluhlu lwemagazini yeTime 100 abona bantu banempembelelo ehlabathini nangomhla we-14 kuMatshi, ngo-2021, ngexesha lomsitho weMbasa yeGrammy, wenza imbali ngokuba lelona gcisa labasetyhini liwongwe embalini lafumana iimbasa ezingama-28.
Ngexesha lakhe lokugqibela, imvumi iziqinisekisile kwakhona njengereferensi kwi umzabalazo woluntu oluntsundu ngokuchasene nobuhlanga. Ngale ndlela, ngo-2020 waqala umboniso othi 'Black Is King', icwecwe elibonakalayo elihlonipha umzabalazo wabantu abantsundu kwaye inokubonwa kwiDisney +.
Uyafuna ukuva ukuba yintoni entsha evela kuBeyoncé?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » I-Renaissance, icwecwe elitsha likaBeyoncé, sele linomhla wokuphuma